खुशीको खबर: कोरोनाले पुरै विश्व थला परेको बेला नेपालमै भयो यस्तो चमत्कार, डाक्टर समेत चकित ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > खुशीको खबर: कोरोनाले पुरै विश्व थला परेको बेला नेपालमै भयो यस्तो चमत्कार, डाक्टर समेत चकित !
admin August 28, 2020 August 28, 2020 जीवनशैली, समाचार, स्वास्थ्य	0
एजेन्सी । कोरोना भाइरस सङ्क्रमित गर्भवतीबाट जन्मिएको शिशुमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ । बुटवलबाट कोहलपुर मेडिकल कलेज रिफर गरिएकी कोरोना सङ्क्रमित गर्भवतीबाट जन्मिएको शिशुको पिसिआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मेडिकल कलेजका उपनिर्देशक दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिका–११ नहरपुरकी २८ वर्षीया गर्भवतीको यही भदौ ६ गते बिहान शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
शल्यक्रियामार्फत निकालिएको छोरीको बिहीबार रिपोर्ट आएको हो । अहिले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यावस्था ठिक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । शिशुको रिपोर्ट आए पनि आमाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आए अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित गर्भवतीको उपचारको व्यवस्था नभएपछि उहाँलाई भदौ १ गते कोहलपुर रिफर गरिएको थियो । यस अघि ३ जना संक्रमितको सफल शल्यकृया गरिएको छ । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो पनि: प्रधानमन्त्री ठूलो योजनामा आगामी साता हुँदैछ राजनीतिमा यस्तो उथलपुथल !
जनस्तरवाट निकै आलोचित बन्दै आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब मन्त्रीमण्डलनै परिवर्तन गर्ने योजनामा पुगेको खुलेको छ । उनी पार्टीभित्र पनि आलोचित भएपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहा लगायतका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीवाट राजिनामा मागेपछि नेकपा भित्रको विवाद चुलिएको थियो ।
ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको राजिनामा मागिएको हो । अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर विवाद मिलाउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । जनस्तरमै आलोचित भएका र राम्रो प्रतिफल दिन नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । पार्टीको गुटलाई मिलाउन पनि उनी मन्त्री फेर्ने योजनामा पुगेका हुन् ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको सुझावलाई अन्तिम रुप दिई निर्णय प्रक्रियामा लगिने भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा रहेको सुझावलाई अन्तिम रुप दिई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । कार्यदलले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन र महाधिवेशन गर्ने विषय समेत उल्लेख गरी सुझाव दिए पछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको कायान्वयनको योजनामा लागेको बुझिएको छ । अब एक सातामै त्यसको रिजल्ट देखिने विश्वस्त श्रोतले बताएको छ ।
सचिवालयका कुन नेताले कति कोटा पाउने र को को मन्त्री हुने भन्ने विषय समेत भित्र भित्र उठिरहेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री ओली पुरै सेट परिवर्तनको तयारीमा रहेको बुझिएको छ । कार्यक्षमता हेरेर राख्नैपर्ने भएमात्र केही मन्त्री रहने भएको बुझिएको छ । बाँकी सबै बिदा हुनेछन् । मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलावा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पनि मान्य हुनेगरी फेरवदलमा लागेको बुझिएको छ ।